Xulista 10 mawduucyada WordPress ee jawaabta bilaashka ah. Abuurista khadka tooska ah
Melisa Perrotta | | Design Graphic, Dulucda, WordPress
Maqaalkii hore ee ku saabsan casharrada WordPress ee loogu talagalay dadka bilowga ah waxaan ku sharraxnay muhiimadda ay barxaddan heshay. Maanta 28% ka mid ah boggaga internetka ayaa la abuuray oo / ama lagu sameeyay WordPress. Jaantuskan cabsida leh wuxuu naga dhigayaa inaan ka fikirno fursadaha shaqo ee ka furmaya suuqa garaafka.
Sababtaas awgeed waxaan go'aansanay inaan aruurino 10 tayada mawduucyada WordPress. Dhammaan naqshadahani waxay muujinayaan qaab la jaanqaadi kara isbeddellada hadda ugu muhiimsan.
Si loo helo mawduucyadan quruxda badan dhagsii cinwaanka. Waxay kuu tilmaami doontaa bogga soo dejinta. Ku raaxayso!
9 Ugu yaraan
Ildy waa bog badan oo qurux badan oo lagu dhisay nidaamka Bootstrap. Waa bog run ahaantii jawaab celin, moobil iyo saaxiibtinimo. Mawduuca ayaa ku habboon bogagga ganacsiga, bogagga guriga, faylalka tacliimeed, iyo bogagga hal-abuurka leh.
Mawduuc WordPress ah oo aad u kala duwan oo halbeeg ah oo leh qaab aad u shaqeynaya. Waa template aad u horumarsan maadaama ay leedahay xulashooyin habeyn kala duwan. Mawduucani wuxuu la yimaadaa widget-yada bogga badan ee guriga loo isticmaali karo in lagu daro faylalka, markhaatiyada, kal-fadhiyada isku midka ah, macluumaadka badeecada, wicitaanada waxqabadka iyo waxyaabo kale oo badan.
Bixinta MedZone u sameynta WordPress Widget kasta; taas oo macnaheedu yahay inaad ku dari karto nashqad gaar ah meelaha aad raadineyso, kalandarka, badhamada iyo kuwo kaloo badan. Qalab kasta wuxuu leeyahay qaab caado ah si loo hubiyo in curiyaha ku habboon yahay bartaada.
Stanley waa mowduuc lagu dhisay Bootsrap 4 oo loogu talagalay WordPress. Template-ka nooca Twitter-ka ah waxay u oggolaaneysaa habeynta ikhtiyaarrada iyo sameynta nooca nooca faylalka. Waxay sidoo kale la socotaa 3 bog oo qaabab ah iyo naqshad jawaab celin ah.
Vantage waa shay is bedbeddel badan oo is-bedbeddela leh. Awooddiisu waa isdhexgalka xoogan ee udhaxeeya shebekadaha sida Bog-dhise loogu talagalay qaabeynta bogga jawaabta, Smart Builder 3 ee qurxinta quruxda badan, iyo WooCommerce si ay kaaga caawiyaan inaad internetka ku iibiso. Tani waa shey diyaar u ah qaybta dambe ee isha.
Mawduuca Sydnety waxaa loogu talagalay shirkadaha iyo kuwa madaxbanaan ee doonaya inay ku kasbadaan internetka. Habeynta ikhtiyaariyada ayaa ah mid aad u ballaadhan, oo leh xulashooyin Google Fonts, astaamaha xamuulka iyo kuwo kale. Waxay leedahay a bogga boggiisa oo buuxa, nidaamka hagitaanku wuxuu ka caawiyaa isticmaalaha inuu maro bogga oo dhan. Template-ka ayaa ka jawaabaya wuxuuna la yimaadaa in ka badan 600 nooc oo farta Google ah midkee laga dooranayaa. Sidoo kale waa tarjumaad diyaar ah waxayna la imaaneysaa dhisme isku mid ah.
Radiate waa mawduuc WordPress ah oo jawaab celin ah, oo leh fikrad aad u nadiif ah oo blog-gaar ah. Mawduucani wuxuu taageeraa sawirka cebecera parallax. Waxay sidoo kale isku dhafanaysaa ikhtiyaarrada midabka ee bogga u-dejiyaha kuu oggolaanaya inaad maamusho dhammaan astaamaha iyo xiriiriyeyaasha boggaaga. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad beddesho naqshadda boggaaga oo dhan adoo adeegsanaya CSS. Waxaad ku dari kartaa asalka caadada, qaybta bogga koowaad, aagga widget, iwm.
Hueman waa mawduuc loogu talagalay goobaha u baahan gelitaan joogto ah ama ku habboon joornaalada internetka. Waxaa laga abuuray shabakad afar-sadar ah, waxay u oggolaaneysaa is-dhexgalka qoraalka iyo sawir qaadista, iyo sidoo kale lahaanshaha qayb muhiim ah oo ka mid ah shabakadaha bulshada.
Minamaze waa nooca bilaashka ah ee mawduuca xirfadaha badan (Minamaza Pro). Waa mawduuc fikrad u ah meheradaha ganacsiga ama bogagga. Template-ku wuxuu leeyahay qaab-dhismeed waxtar leh, oo lagu diyaariyey HD retina oo wuxuu leeyahay guddi ikhtiyaarro mowduuc aad u awood badan oo kuu oggolaanaya inaad isbeddel ku sameyso adigoon lambarka wax ka bedelin. Mawduuca sidoo kale wuxuu la yimaadaa mid aad u fudud in la isticmaalo slider.
Esteem waa mawduuc WordPress ah mid aad u fudud oo nadiif ah oo ujeeddooyin badan leh oo ku habboon goobaha ganacsiga, faylalka, baloogyada, iwm Mawduucani wuxuu taageeraa madax-hagaajin la beddeli karo, asalka iyo wijiyadaha, wuxuu sidoo kale la yimaadaa qaabab bogga ah wuxuuna leeyahay guddi ikhtiyaarro ah oo lagu qaabeeyo midabka aasaasiga ah, astaanta goobta, bog-jireed, dhinac-gees iyo 3 nooc oo baloog ah. Waxay sidoo kale si buuxda ula jaanqaadi kartaa waxyaabo caan ah oo caan ah sida Xiriirka Foomka 7, WP PageNavi, iyo Breadcrumb Navxt.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Naqshadeynta Webka » Dulucda » Xulashada 10 mawduucyada WordPress ee jawaabta bilaashka ah
Kernit, oo ah xarfo bilaash ah oo uu dhiirrigeliyey ninka weyn ee Jim Henson